ताल लामा: विवरण र विशेषताहरु
ताल लामा, जसको फोटो यस लेखमा हो - सबै भन्दा सुन्दर र चिरपरिचित अलवण जलाशय Taimyr। उहाँले रूसी को चमत्कार को एक मानिन्छ। धेरै दन्त्यकथा मा shrouded ताल को इतिहास, बारे एक सय मिलियन वर्ष पहिले सुरु हुन्छ।
ताल को नाम
ताल नाम को Tungus र Evenki ध्वनि भाषामा समुद्र वा समुद्र लागि शब्द धेरै समान छ। क्रांति अघि अस्तित्व कि नक्सामा, ताल अर्को नाम भनिन्थ्यो - Davydovo। यो कहिले काँही Taimyr लेक Baikal भनिन्छ।
को Taimyr प्रायद्वीप मा ताल लामा को पठार Putorana को पश्चिम पक्षमा स्थित छ। लगभग एक सय र बीस किलोमिटर Norilsk को उत्तर-पूर्वी। tectonic मूल को एक जलाशय र हिमालहरू बीच एक उपत्यकाका स्थित छ। Lamsky -, द्वारा पहाड Mikchangda घेरिएको अन्य मा ताल को एक छेउमा। 450 800 मीटर देखि चुचुराहरूको उचाइ।
ताल लामो 80-किलोमिटर साँप जस्तै आकार छ। चौध किलोमिटर बारेमा दुई पक्ष बीच चौडाई। को नजिककालागि मीटर सयौं मा मापन। 300 मीटर को एक गहिराई संग ताल लामा, 318 वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्र छ।
लाइन, असमान बीहड, 200 किलोमिटर लामो किनारा। बैंक, ठाडो उच्च र चट्टानी छन्। धेरै सही पानीको किनारा मा काटेर र सरासर ठाडो भीर गरेर तल जाने छन्। कोमल मात्र पश्चिम बैंक। त्यहाँ एक मध्य र साना पेबल्स छ, विशाल boulders र बालुवा र रोडा को सानो पहाड पूरा गर्न सक्छन्।
जलाशय मा पहाड प्रायजसो खोंच देखि जो साठी मीटर को हाइट्स पुग्न झरने, गठन, धेरै नदीहरू पर्छ। तिनीहरूले अक्सर "रूँदै रक" भनिन्छ। तिनीहरूले क्रिस्टल-स्पष्ट पानी, सौन्दर्य र शक्ति प्रभावित। ताल लामा पहाड घेरिएको छ। बढ्दै स्प्रूस वन र सन्टी Woodlands को बैंकहरू केही ठाउँमा। तपाईं बेरी ब्रश र मेपल पूरा गर्न सक्छन्। को undergrowth मा Rosemary बढ्दै। यो भने उज्ज्वल गलैँचा, ब्लूबेरी र cranberries रूपमा, ढलान बढ्छ। मशरूम पनि एकदम धेरै पाउन सकिन्छ।
मारना ताल पानी अन्य शरीर जोडिएको: खोक्रो र Kapchuk र साना नदीहरू। वर्ष जलाशय को आठ महिना बरफ को मीटर बाक्लो पाप्रो समेट्छ। जुन को बीचमा सम्म यो ढल्छ। ताल navigable छ। पानी मा एक हप्ताको एक पटक Llamas सानो डुङ्गा, भनिन्छ बसों पर्यटकहरु भ्रमण यात्राहरूमा बोक्न।
ताल निरन्तर rainwater, हिउँ र बरफ पग्लिने द्वारा replenished छ। वसन्त मा पानी स्तर स्थिर-अप समयमा पनि उठ्नेछ गर्न थाल्छ। यसको अवधि 200 220 दिन हो। पनि गर्मी मा ताल मा पानी को तापमान सात डिग्री भन्दा बढी छैन, र एक कम खनिज सामग्री छ। अक्सिजन संतृप्ति सीमा अधिक गर्न, उच्च नजिक छ।
ताल को एक्वाटिक वनस्पति धेरै विविध छ। यो पठार Putorana सबै पानी शरीर को विशिष्ट छ। Zooplankton copepods (cyclo- र calanids) को अनिवार्य हुन्छन्। पनि rotifers र cladocerans प्रस्तुत। तर लेक लामा मा zooplankton कम बायोमास छ।
ताल लामा मा पानी क्रिस्टल, स्पष्ट पारदर्शी, चिसो र ताजा छ। जलाशय को तल नुन को एक मोटी पत्र छ किनभने यो सबै अधिक आश्चर्यजनक छ। यो अझै वैज्ञानिकहरू बाहिर समझ छैन जो जलाशय, को रहस्यहरुलाई को छ।
ताल लामा अक्सर psychics र esoteric आउँछन्। तिनीहरूले विश्वास पानी यो शरीर कि - ठूलो बलको स्रोत र otherworldly ऊर्जा जलाशय एक प्रकारको। जो यो लैंडिंग भनेर विश्वास ufologists, गर्न चासो ताल लामा विदेशी जहाज। Ufologists पनि ताल यसको आधार नजिकै सेट अप। तिनीहरूले पनि ताल को तल त्यहाँ एक विदेशी आधार हो भन्ने।
ताल मा मत्स्य पालन
सबैभन्दा अक्सर तालाब माछा मार्ने उत्साही आउँछन्। धेरै ताल मा माछा। सबैभन्दा यहाँ समातिए छन्:
अक्सर, यो मछुवाहरू loach लागि जाने छ। तीन सात किलोग्राम देखि ठूलो नमूनों समातेर कसैलाई पनि एक साईट हुन सक्छ। माझिहरु समुद्र तट वा तटबन्ध मा "शिकार" को लागि आयोजना गरिन्छ। केही डुङ्गा भाडामा एक शिविरमा साइट मा ले। inflatable - कहिलेकाहीं आफ्नै पौडी सुविधा ल्याउन।
खोला ट्राउट सर्वश्रेष्ठ कताई राति 6-7 घण्टा बिहान सबेरै वा लेट पक्रेको हो। श्रेष्ठ मोड - को शीर्ष वा ठूलो wobblers प्रयोग मा, मार्फत तल-Rieger trolling समयमा। Lures अप चालीस ग्राम हुनुपर्छ। चाँदी वा रातो र पहेंलो रंग मा चित्रित।
लेक लामा मा Loach बरफ बन्द आउँदै पछि सबै भन्दा सक्रिय छन्। र सेप्टेम्बर मा शरद ऋतु, मा सम्म पानी बरफ पाप्रो अन्तर्गत हुनेछ। थप lures मा पकडे र rudd, पाइक र अड्डा। एक माछा मार्ने यात्रा मा छोडेर, तपाईं लामखुट्टे र midges देखि धन संग लिनु आवश्यक छ। ताल तिनीहरूलाई धेरै मा।
ताल लामा (क्रास्नायार्स्क क्षेत्र): प्राप्त गर्न कसरी
पहिले तपाईं Norilsk प्राप्त गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि पानी Alykel पोर्ट Valek गर्न विमानस्थलबाट बस लिन। वैकल्पिक रूपमा - तपाईं घाट एक सवारी पकड गर्न सक्नुहुन्छ। उनको देखि लेक लामा मा मनोरञ्जन केन्द्रमा निम्न शुक्रवारका नदी बसें मा प्रस्थान,
पहिले पोखरी लामा सेवा मा समय सैन्य को बाल्टिक गणराज्यहरु को उच्च बाँध्न दमित। यो बिन्दुमा, त्यसपछि छात्रावास निर्माण र एक स्मारक साइन स्थापित गरिएको छ। तर मूलतः लेक लामा Untouched र अद्वितीय वन्यजन्तु आकर्षित गर्छ। बैंकों मा स्थित केहि हस्टल को एक मा, त्यहाँ प्रदर्शन र जीवन Nganasan, Dolgan चाँदी बेल्ट, र क्षेत्र को आदिवासी जनसंख्या गर्न पहिले belonged धेरै रोचक कलाकृतिहरू विभिन्न विशेषताहरु मा लुगा प्रस्तुत जो एउटा सानो संग्रहालय छ।
दुनिया मा cleanest ताल कहाँ छ?
हावा को प्रकार: सामान्य नियम
दक्षिणी र उत्तरी हात्ती छाप
पुतली तामा-पुतली। यो तामा-पुतली पुतली मा फीड?
एक नवजात शिशु लागि दैनिक हेरविचार
किन बन्द पसलहरूमा मा रूसी "TsentrObuv"?
रूसी खेलौना Terrier: प्रकृति र नस्ल को विशेषताहरु
आधुनिक कलाकार - आधुनिक शैली को प्रतिनिधि
आर्थर बोवेन गर्ने हो? जवान अभिनेता बारेमा सबै
शिशुहरू लागि पौडी - स्वास्थ्य र सुरिलो पालनपोषण गर्न प्रमुख
छुट्टी लागि साइन व्यवहार लागि केक - "जनहरूलाई"!
क्यामेरारोलो इस स्ट्रोलर: आमाबाबुबाट प्रतिक्रिया
परिवर्तन को एक harbinger - तपाईंको आफ्नो विवाह: सपना व्याख्या मा एक नजर
कानून को खबर: नयाँ मोडेल पुरानो पासपोर्ट भिन्न
एयर राइफल "Matador" - आधारभूत प्रकार
पकौडी "Daria।" एक पौराणिक उत्पादन को इतिहास